किन रोजे ओलीले बेइजिङ उड्न हिमालय एयरलाइन्स ?::Online News Portal from State No. 4
किन रोजे ओलीले बेइजिङ उड्न हिमालय एयरलाइन्स ?
बागलुङ, ३१ जेठ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक नीजि क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट ५ असारमा बेइजिङको उडान भर्ने भएका छन्। २६ महिनाअघि भारतीय नाकाबन्दीको निराशाकाबीच पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चीनको साझेदारी रहेको हिमालय एयरलाइन्सको परिक्षण उडान नै आफ्नो चीन भ्रमणबाट गरेका थिए। एक सय ५८ सिट क्षमताको एयरबस ए ३२० विमान प्रधानमन्त्री सहितको ५६ सदस्यीय टोली लिएर ७ चैत २०७२ को साँझ बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदा चीनले ठूलो सम्मान दिएको थियो ओलीलाई। बेइजिङबाट पश्चिम चीनको चेङ्दु हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई घुमाएर सात दिनपछि हिमालय एयरलाइन्स काठमाडौं फर्केको थियो।
त्यही भ्रमणको क्रममा चीनसँग व्यापार तथा पारबहन सम्झौता गरी नेपालमा भारतीय एकाधिकारको अन्त्य गर्न सकिने सन्देश दिए ओलीले। र, त्यही ‘राष्ट्रवादी छवि’ को बलमा चुनाव जितेर अहिले संसदमा दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बिहिबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा सञ्चारकर्मीबीच प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको विमान लिएर भारत भ्रमणमा गएको र नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हिमालय एयरलाइन्समा बेइजिङ उड्ने बताए।
हिमालय एयरलाइन्स चीन सरकारको कम्पनी तिब्बत एयरलाइन्सको साझेदारी रहेको नेपालको नीजि कम्पनी हो। तिब्बत एयरलाइन्स एयर चाइनाको भगिनी कम्पनी हो, जसको हिमालय एयरलाइन्समा ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ। ५१ प्रतिशत सेयर यति वल्र्ड इन्भेष्टमेन्टका आङछिरिङ शेर्पाको रहेको छ, जो ओली निकट पर्यटन व्यवसायी हुन्। काठमाडौंमा शेर्पाले सञ्चालन गरेको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा यसअघि एमालेको जमघट हुँदै आएको थियो भने एमाले र माओवादी एकतापछि नेकपाको बैठक पनि त्यहीँ बसेको थियो।
चीनका सरकारी र नीजि कम्पनीहरूले विश्वभर विभिन्न किसिमका सझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। हिमालय एयरलाइन्समा नेपालसँग गरिएको साझेदारी एयरलाइन्स क्षेत्रमा चीनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हो, जसलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ कुटनीतिक अधिकारीले पनि सफल उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेइजिङ उडाएर २६ महिनाअघि सफल परिक्षण उडानबाट सञ्चालनमा आएको हिमालय एयरलाइन्सले त्यसयता आफ्ना तीन वटा एयरबसबाट दर्जनौं उडान भरेपनि अपेक्षित रुपमा अझै व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको मानिँदैन। हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो आकर्षक वेभपेजमा जनाए अनुसार यसले अहिले काठमाडौंबाट सउदी अरेबियाको डामम, कतारको दोहा, मलेसियाको क्वाललाम्पुर र दुबईमा उडान गरिरहेको छ। सायद चीनको लगानीकै कारण अझै दिल्ली उडानको अनुमती पाउन नसकेको हिमालयको म्यानमारको रङ्गुन र श्रीलंकाको कोलम्बो उडान पनि केही महिनामै रोकिएको थियो।
तर राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सपछि हिमालय नै नेपालको त्यस्तो एयरलाइन्स हो, जसले सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमै चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। दिल्ली उडानको अनुमतीका लागि अझै प्रयास गरिरहेको हिमालयले हङकङ, ल्हासा र चीनका अन्य गन्तव्यमा पनि उडान सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ। पहिलो पटक हिमालय एयरलाइन्समा काठमाडौंबाट सिधै बेइजिङ उडान गर्दा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान प्रयोग नगरिएको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो। तर भारतीय नाकाबन्दीका बेला चीनसँगको साझेदारीमा सञ्चालित एयरलाइन्समा उडेर ओलीले भने बेइजिङसँग काठमाडौंको निकटता बढ्ने सन्देश दिन खोजेका थिए सायद दिल्लीलाई। सँगसँगै ओलीले चीनले भ्रमणका लागि निशुल्क रुपमा काठमाडौं पठाइदिन लागेको चार्टर्ड विमान प्रयोग नगरेर आफ्नो ‘स्वाभिमानी छवि’ को अर्को सन्देश पनि दिन खोजेका थिए बेइजिङलाई।
दुई वर्ष पहिले र अहिले प्रधानमन्त्री उनै ओली भएपनि राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। ठूलो बहुमतसहित ओली नै प्रधानमन्त्री बनेपछि दिल्ली अहिले सबै कुरा छोडेर काठमाडौंसँग सम्बन्ध सुधार गर्न अग्रसर भइरहेको छ। ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भए लगत्तै दिल्ली पुगेर पहिलेको परिस्थिति बिर्सेर नयाँ सम्बन्ध विकास गर्न हात बढाइसकेका छन्, जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेर सकारात्मक जवाफ फर्काएका छन्। दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधारकै चरणमा रहेका ओलीबाट दुई वर्षअघि चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुने बलियो अपेक्षा राखिएको छ नेपालमा।
के प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने झैं नीजि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मात्रै हिमालय एयरलाइन्समा बेइजिङ उड्न लागेका हुन्? कि ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारसँगै चीनसँग नेपालको साझेदारी झन् बलियो हुँदै जाने र दुई वर्ष अघि भएका सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने सन्देश पनि सँगसँगै दिन खोजेका हुन्? दोस्रो पटकको बेइजिङ उडानमा पनि चीनको लगानी रहेको र दिल्लीले उडान अनुमती नदिएको हिमालय एयरलाइन्स नै रोजेर ओलीले कस्तो कुटनीतिक सन्देश दिन खोजेका होलान ? ओलीको ‘विमान कुटनीति’ को अर्थ संभवतः उनी बेइजिङबाट फर्केपछि बढी खुल्नेछ।
एक महिनाभित्र कर्मचारी समायोजनको तयारी
सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा लाग्न सभापति देउवाको निर्देशन
आयोगमा पौडेल, सुवेदी, दत्त, चौधरी र अन्सारी सिफारिस